Uluvelisa njani uPhuculo-oluHlaziyiweyo
Ngu-Mark P. Holtzman
Yimalini ekufuneka uyithengisile ukuze uphule? Inkqubo ye- indawo yokuqhekeza (BE) lixabiso lentengiso elifunekayo ukuze ufumane ingeniso zero-intengiso eyoneleyo ukuze ungafumani lahleko, kodwa ukuthengisa okungonelanga ukufumana inzuzo. Ungasebenzisa iindlela ngeendlela ezahlukeneyo-iigrafu kunye neefomula-ukuhlalutya apho ikhefu lakho-lekona liwela khona.
Zoba igrafu ukhangele indawo yokuqhekeka
Kwigrafu yexabiso-yevolumu-yenzuzo, indawo yokuqhekeza ngumthamo wentengiso apho umgca wokuthengisa uwonke unqamleza kunye nomtya weendleko zizonke. Umthamo wentengiso yindawo apho intengiso iyonke ilingana neendleko zizonke.
Masithi, njengomzekelo webhasikithi ngaphambili kwisahluko, inkampani ithengisa iimveliso zayo ngeedola ezili-15 inye, ngeendleko eziguquguqukayo ze- $ 6 ngeyunithi kunye neendleko ezizinzileyo ezingama- $ 300. Igrafu ibonisa ukuba indawo yokuphumla yenkampani yenzeka xa inkampani ithengisa iiyunithi ezingama-34.
Kwiimveliso ezininzi (njengebhasikithi) unokuthengisa kuphela iiyunithi ezipheleleyo. Ke ngoko, ukuba uthengisa iiyunithi ezipheleleyo, indawo yokuphumla kufuneka ibe yinani elipheleleyo. Le nyani ithetha ukuba ukuba ikhefu-kunye nohlalutyo lubangela umthamo othile wentengiso (njengeeyunithi ezingama-33.33333), kuya kufuneka usonge (kule meko, ukuya kwiiyunithi ezingama-34), nokuba iqhezu lisondele kwinani elipheleleyo elingaphantsi inani eliphezulu.
Ukuba indawo yakho yokuqhekeza ilingana no-33.0001, yirhangqa ukuya kuma-34. Ukuba usondeza ezantsi (ukuya kwiiyunithi ezingama-33), owona mthamo wentengiso ungaphantsi kwenqaku lekhefu, nakweli nqanaba levolumu, inkampani yakho iya kuthi ukulahleka komnatha.
Sebenzisa indlela yefomula ukufumana indawo yokuqhekeza
Xa ufuna ukusombulula iingxaki zokwenyani, ukuzoba iigrafu akusoloko kusebenza. Kwimeko apho, ufuna ukuthembela kwiifomula ezintathu ezisebenzisa umda wegalelo ukulinganisa umvuzo.
Indawo yokuphumla kulapho ingeniso yomnatha inguzero, ke vele usete imali engenayo elingana no-zero, fakela nayiphi na ingcaciso oyinikiweyo kolunye ubalo, emva koko usombulule ukuthengisa okanye umthamo wentengiso. Ngcono ngoku: Kwinqanaba lekhefu, igalelo lilonke lilingana neendleko ezizinzileyo.
Ndifanele ukuthatha i-adderall
Masithi inkampani ine- $ 30,000 kwiindleko ezizinzileyo. Limalini igalelo elipheleleyo ekufuneka likwenzile ukuze laphule?
Ingeniso eseleyo = Umrhumo wonke wegalelo-Iindleko ezizinzileyo
0 = Umrhumo wonke wegaleloBE- Iindleko ezizinzileyo
0 = Umrhumo wonke wegaleloBE- $ 30,000
$ 30,000 = Umrhumo opheleleyo wegaleloBE
Apha kwakhona, kwinqanaba lokuphumla, igalelo lilonke elilinganayo neendleko ezizinzileyo ze- $ 30,000. Ngoku ukuba inkampani inegalelo lomda kwiyunithi ye- $ 6 kunye neendleko ezizinzileyo ze- $ 600. Yintoni indawo yokuqhekeza neeyunithi?
Enye inkampani inegalelo lomda weepesenti ezingama-40 kunye neendleko ezizinzileyo ze- $ 1,000. Ixabiso lokuthengisa li- $ 1 ngeyunithi. Yintoni ikhefu lokulinganisa ngeedola?
osteo bi flex izithako
Ungabonisa indawo yokuqhekeka kwiiyunithi okanye kwiidola. Ukuba ifomula yakho ikunika iiyunithi kwaye ufuna iidola, phinda inani leeyunithi ngexabiso lokuthengisa. Ukuba ifomula yakho ikunika iidola kwaye ufuna iiyunithi, hlula nje ngexabiso lokuthengisa.
Amayeza oxinzelelo kunye notywala
i-amoxicillin 400mg 5ml idosi ngokobunzima
I-sertraline hcl 50mg ithebhulethi
zingaphi i-benadryl zenja